တစ်နေ့ကို de de france ဘယ်လောက်ကြာမလဲ - အကောင်းဆုံးအဖြေများ
အဓိက > အကောင်းဆုံးအဖြေများ > Tour de France ဘယ်လောက်ကြာမလဲ - လက်တွေ့ကျတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေ
Tour de France ဘယ်လောက်ကြာမလဲ - လက်တွေ့ကျတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေ
တစ်နေ့ကို de de france ဘယ်လောက်ကြာမလဲ
။ ည့်သည်၂၃ ရက်အတွင်းမိုင် ၂,၂၀၀ ကျော်ကို ၂ ရက်မျှအနားယူမည်။ ထိုအနားယူရာနေ့ရက်များတွင်စက်ဘီးစီးသူများသည်နှစ်နာရီသုံးနာရီစီးနိုင်သည်။ ဒါကရာစုနှစ်တစ်ခုကျော် (မိုင် ၁၀၀) စီးတဲ့စီးနင်းမှုပါတစ်နေ့လျှင်။
Tour de France ရှိဤမြင်းစီးသူရဲများအားသင်အနီးကပ်ကြည့်မည်ဆိုလျှင်ကမ္ဘာပေါ်ရှိအကောင်းဆုံးစက်ဘီးစီးသူအချို့ကိုသင်တွေ့လိမ့်မည်။ မင်းဒီမှာပြန်လာ သူတို့ကဆက်လက်စောင့်ရှောက်ကြသော်လည်းသူတို့၏အသင်းဖော်များရှေ့တွင်ရှေ့တန်းတက်နေစဉ်အနားယူကြသည်။
ဒီနည်းစနစ်ကိုအကြမ်းရေးဆွဲခြင်းလို့ခေါ်တယ်၊ သူတို့ကိုပြင်သစ်ကနေတစ်ဆင့်သုံးပတ်ကြာအပြေးပြိုင်နိုင်အောင်ကူညီပေးနိုင်တယ် သို့သော်လမ်းကြောင်း၏ဤအပိုင်းများ၌သာမူကြမ်းသည်ကြီးမားသောခြားနားမှု - ရှည်လျားသော၊ နောက်ဆုံးတွင်ဤယာဉ်မောင်းများသည်အခြားသူများကိုအားမကိုးနိုင်သောအဆင့်များသို့ရောက်သည်။
ပြိုင်ပွဲမှာအနိုင်ရဖို့သင်ကိုယ်တိုင်ရဲ့ခံနိုင်ရည်နဲ့ခံနိုင်ရည်ကိုအားကိုးရမယ်။ ဒီနေရာမှာ cllimbs အပေါ်ဖြစ်ပျက်။ သူတို့ဟာပြိုင်ပွဲရဲ့ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်ပြီးစိတ်လှုပ်ရှားစရာအကောင်းဆုံးအစိတ်အပိုင်းများဖြစ်ပြီး Tour de France ကိုကမ္ဘာပေါ်တွင်အကျော်ကြားဆုံးစက်ဘီးခရီးစဉ်အဖြစ်သတ်မှတ်ကြသည်။
Tour de France သည် '' ရောင်းရန်အတွက်အားကစားသတင်းစာ L. ၏မိတ္တူများကိုပိုမိုရယူရန်အလွန်ကြိုးစားခဲ့သည်။ ၁၉၀၃ ခုနှစ်တွင်အယ်ဒီတာ Henri Desgranges သည် ၁၉ ရက်ကြာကီလိုမီတာ ၂,၄၀၀ ရှည်သောစက်ဘီးပြိုင်ပွဲကိုနိုင်ငံတစ်ဝှမ်းတွင်ကျင်းပခဲ့သည်။
၁၉၁၀ တွင် Desgranges ၏စာရေးဆရာတစ် ဦး ဖြစ်သော Alphonse Steines သည် tourmalet လမ်းကြောင်းသို့လှည့်ကွက်အသစ်တစ်ခုထည့်ရန်အကြံပြုခဲ့သည်။ ဒါဟာရက်စက်စွာ 19 ကီလိုမီတာတောင်တက် 1400 မီတာနှင့်အတူတောင်တက်ခဲ့သည်။ ဖြစ်နိုင်ရင်တောင်မှ Steines သည်သူ၏ကားပေါ်တက်ပြီးတောင်တက်နိုင်သည်။
သူကားမောင်းထွက်သွားသော်လည်းသူ၏ကားသည်ဆီးနှင်းများတွင် ကပ်၍ အိပ်မောကျနေပြီးသေလုနီးပါးဖြစ်ခဲ့သည်။ မည်သို့ပင်ဆိုစေကာ, သူကဖတ်ပါတဲ့ကြေးနန်းပေးပို့: Tourmalet ကူးခဲ့သည်။ လမ်းကောင်း။
passableုံဖြတ်သန်း။ Tourmalet သည် Tour ကို ၁၉၁၀ တွင်စတင်ခဲ့သည်။ ပြင်သစ်စက်ဘီးစီး Octave Lapize သည်တက်သည်နှင့်အောင်မြင်စွာပထမဆုံးတက်နိုင်ခဲ့သည်။
သို့သော်သူသည်အချို့အပိုင်းများကိုတက်ခဲ့ရသည်။ ထိပ်သီးအစည်းအဝေးသို့ရောက်သောအခါအရာရှိများကိုလုပ်ကြံသတ်ဖြတ်သူဟုခေါ်ကြသည်။ သို့သော်သူသည်ခရီးစဉ်တစ်ခုလုံးအနိုင်ရခဲ့ပြီးသူ၏ရုပ်ထုကို Tourmalet ၏ထိပ်တွင်ထားခဲ့သည်။ ထိုအချိန်မှစ၍ တောင်တက်ခြင်းသည် Tour deFrance ၏အစိတ်အပိုင်းဖြစ်သည်။
ယခုနှစ်တွင်လမ်းကြောင်းသည် ၂၁ ရက်အတွင်းအဆင့် ၂၁ ဆင့်ပါဝင်သည်။ ဒါဟာအဓိကတောင်တက် 30 ရှိပါတယ်; သူတို့ထဲကခုနစ်ခုခရီးစဉ်၏အခက်ခဲဆုံးအမျိုးအစားပိုင်။ 86 ကြိမ်မြောက်အဘို့အသော Tourmalet အပါအဝင်။
ခရီးစဉ်၏သမိုင်း၌အခြားမည်သည့်တိုးထက်ပို။ ဤအတောင်တက်အပေါ်, ခရီးစဉ်နောက်ဆုံးမှာအနိုင်ရသို့မဟုတ်ရှုံးနိမ့်ပါလိမ့်မယ်။ ဤရွေ့ကားများသောအားဖြင့် 200 ကီလိုမီတာပတ်လည်ဖြစ်ကြောင်းရှည်လျားပြားချပ်ချပ်နှင့်တောင်ကုန်းအဆင့်ဆင့်ဖြစ်ကြသည်။
ဤတွင်စက်ဘီးစီးသူများသည် Peloton ဟုခေါ်သောဖွဲ့စည်းမှုတစ်ခုတွင်အတူတူစီးကြသည်။ ၎င်းသည်စက်ဘီးစီးသူများအားအခြားမြင်းစီးသူရဲနောက်ကွယ်မှထိုင်ခြင်းသို့မဟုတ်ချောင်းရေစီးစီးနင်းခြင်းအားဖြင့်စွမ်းအင်ကိုသက်သာစေသည်။ မြင့်မားသောအမြန်နှုန်းဖြင့်မောင်းသူများသည်လေကိုခုခံကာကွယ်ရန်သူတို့၏စွမ်းအင်အများစုကိုအသုံးပြုကြသည်။
ကားမောင်းသူတစ် ဦး ကနောက်တစ်ယောက်နောက်ကိုလိုက်နေလျှင်၊ သင်က၎င်းအားအများကြီးမှကာကွယ်ပေးသည်။ ဤသည် pedaling အများကြီးပိုမိုလွယ်ကူစေသည်သင်ရှေ့တွင်မြင်းစီးသူရဲနှင့်အတူတက်စောင့်ရှောက်နိုင်ပါတယ်။ ဤအချက်ကိုတိုင်းတာရန်စက်ဘီးစီးသူတစ် ဦး ၏စွမ်းအားမည်မျှရှိသည်ကိုသင်ကြည့်ရပါမည်။
ဤတွင် peloton ၏ ဦး ခေါင်းတွင် Tour deFrance မြင်းစီးသူသည်အနည်းဆုံး ၃၀၀ ဝပ်ဝပ်စွမ်းအင်ကိုထုတ်လုပ်လိမ့်မည်။ ငါစက်ဘီးပေါ်ခုန်လိုက်ပြီးအဲဒီလိုခံစားရပုံကိုကြည့်ဖို့အတွက် ၃၀၀ ဝပ်မှာ ၂ ကီလိုမီတာသာတကယ်ခက်ခဲတယ်။ နှိုင်းယှဉ်မှုအဘို့: အကယ်၍ ယာဉ်မောင်းတစ် ဦး သည် peloton ၏ရှေ့ဘက်တွင်ရှိပါကသူသည်တူညီသောအမြန်နှုန်းဖြင့် ၂၄၀ ဝဝပ်ပတ်ပတ်လည်ထုတ်လုပ်ရန်သာလိုအပ်သည်။
၂ ကီလိုမီတာ ၂၄၀ ဝပ်ကိုကိုင်ဆောင်ခြင်းသည်သိသိသာသာပိုမိုလွယ်ကူသည်။ ဤနှစ်ခုသည်ကီလိုမီတာ ၂၀၀ ကျယ်ပြန့်သောအဆင့်ကိုတစ်ချိန်တည်းအပြီးသတ်နိုင်လျှင်ပင်တစ်ခုသည်အခြားတစ်ခုထက်သိသိသာသာပင်ပန်းနွမ်းနယ်လိမ့်မည်။ ဒါကြောင့်ဒီခရီးစဉ်မှာအကောင်းဆုံးမောင်းသူအချို့ကိုတွေ့နိုင်တယ်။
သူတို့ဟာသူတို့ရဲ့ကြိုးစားအားထုတ်မှုကိုအခုလုပ်နေတဲ့သူတို့ရဲ့အသင်းဖော်တွေကိုစုစည်းပြီးအသင်းမှာအကောင်းဆုံးစက်ဘီးစီးသူကိုအပြင်းထန်ဆုံးတောင်တန်းတွေအတွက်အနားယူစေတယ်။ သူတို့တစ်ယောက်တည်းနေဖို့ဘယ်မှာလဲ။ peloton သည်ကုန်းတက်လာသောအခါနှေးကွေးသည်။
ဤအဆင့်တွင်ပြိုင်ပွဲသည် Peloton ရှိယာဉ်မောင်းများအားလုံးကိုသက်ရောက်သောဆွဲငင်အားထက်လေကိုခုခံတွန်းလှန်ရန်အားနည်းသည်။ ဒါကြောင့်အခုတော့ယာဉ်မောင်းတိုင်းဟာအရှိန်အဟုန်ကိုတိုးတက်စေဖို့အတွက်ရှေ့နှင့်နောက်မှာထူးခြားတဲ့စွမ်းအင်ကိုအသုံးပြုရပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့် ၂၀၁၀ ခုနှစ်တွင်ဒိန်းမတ်စက်ဘီးစီးသူ Chris Anker Sorensen သည် Tourmalet တောင်ထိပ်ပေါ်သို့တက်ခဲ့သည်။ “ Chris Anker Sorenesen ရဲ့မျက်နှာကိုကြည့်လိုက်ပါ ဦး ။
ရှေ့ဆုံးမှာနာကျင်မှုကိုထုတ်ဖြေရှင်းခြင်း။ ခေါင်းဆောင်အနေနှင့်သူသည်အုပ်စုတစ်ခုလုံး၏အရှိန်အဟုန်ကိုအဆုံးအဖြတ်ပေးခဲ့သည်။ ဤသည်ဂရပ်သည်နောက်ဆုံးတောင်တက်အပေါ်သူ၏စွမ်းဆောင်ရည်ကိုပြသထားတယ်။
ဒီမှာမယုံနိုင်လောက်အောင် ၅၉၀ ဝပ်ရှိခဲ့တယ်။ 'Chris Anker Sorenson ဆီကစီးနင်းတာအရမ်းကောင်းတယ်၊ ဒါပေမယ့်ဘယ်လောက်ကြာကြာခံနိုင်မှာလဲ။ “ အခုဆိုရင်အမေရိကန်စက်ဘီးစီးသူ Chris Horner ကိုကြည့်ပါ ဦး ။ သူသည် Sorenson ၏နောက်တွင်နေရာအတော်များများရှိသော်လည်းသူ၏စွမ်းဆောင်ရည်မှာအတူတူပင်ဖြစ်သည်။
Sorenson မြန်လေလေ၊ ကျန် peloton အနေနှင့် ပို၍ ကြိုးစားလေလေဖြစ်သည်။ အားနည်းသောမြင်းစီးသူရဲများနောက်ကွယ်မှကျလာသည်နှင့်အမျှဖွဲ့စည်းမှုသည်စတင်ပြိုလဲခဲ့သည်။ ယခုပြိုင်ပွဲတွင် Tour အကောင်းဆုံးပြိုင်ဖက်များသည်ရှေ့သို့ချီတက်ရန်အတွက်ဆွဲအားမှသူတို့စွမ်းအားသို့ပြောင်းသွားသည့်အချိန်ဖြစ်သည်။
နောက်ဆုံး Andy Schleck သည်တိုက်ခိုက်ခံရပြီး Alberto Contador သည်သူနှင့်အတူထွက်ခွာခဲ့သည်။ ဒီပြိုင်ပွဲဟာဒီနောက်မှာအကောင်းဆုံးမောင်းသူနှစ် ဦး လိုပဲလူဇင်ဘတ်မြို့မှ Andy Schleck နှင့်စပိန်နိုင်ငံမှ Alberto Contador တို့ဖြစ်ပါတယ်။ Peloton ရဲ့နောက်ကျောမှာရှည်လျားပြီးပြားနေတဲ့အဆင့်တွေ။ ဒါပေမယ့်ဒီနေရာမှာသူတို့ Tourmalet တစ်ဝက်ကိုတက်ပြီးအောင်ပွဲအတွက်အဆင်သင့်ဖြစ်နေပြီ။ ပြီးခဲ့သည့်ရှစ်ကီလိုမီတာအကွာအဝေးတွင်လူတိုင်းသည် ၄၀၀ ကျော် watts များထုတ်လွှတ်သင့်သည်။
အဝါရောင်ဂျာစီတွင် Contador သည် Tour de France ၏ခေါင်းဆောင်တစ် ဦး ဖြစ်ပြီးရှစ်စက္ကန့်သာ ဦး ဆောင်ခဲ့သည်။ ဒုတိယကတော့ဒီတောင်တက်မှာသူ့ကိုရှုံးဖို့ကြိုးစားသူ Schleck ပဲ။ 'Andy Schleck သည်လူတစ်ယောက်ကဲ့သို့မောင်းနှင်သည်' ထိပ်ဆုံးသို့ ဦး တည်သွားခဲ့သည်
Schleck ညာဘက်ဖြစ်ပါတယ်။ Kontador! Schleck အနိုင်ရရှိ! Contador ဒုတိယလာ! Schleck သည် Contador ကို Tourmalet ၏ခေါင်းကိုဆံပင်အနံဖြင့်ဖြုတ်ချလိုက်သည်။ သူမဆုံးရှုံးခဲ့ရသောကြောင့် Contador သည်သူ၏ ဦး ဆောင်မှုကိုဆက်လက်ထားခဲ့ပြီး Tour de France ကိုအနိုင်ရရှိခဲ့သည်။
နှစ်ပတ်ကျော်ပြေးပွဲမှာတောင်မှမြင်းစီးသူရဲတွေဟာပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်အထက် ၂၇၇၀ မီတာကိုတက်ကြပြီးလေထုကပါးလွှာပြီးတောင်တက်တာကိုပိုပြီးခက်ခဲစေတယ်။ ၎င်းသည် Tour de France ကိုဤအားကစားတွင်အားအရှိဆုံးနှင့်ဂုဏ်သတင်းဆုံးပြိုင်ပွဲဖြစ်စေသည်။ အနိုင်ရသူဟာအပြင်းထန်ဆုံးမြင်းစီးသူရဲမဟုတ်ဘဲနာကျင်မှုအများဆုံးကိုခံနိုင်ရည်ရှိသူဖြစ်ပြီးနောက်ဆုံးမှာတောင်များကိုအောင်နိုင်ဖို့အတွက်ဘာတွေလိုအပ်သလဲ။
Tour de France သည်မိုင်နှင့်မည်မျှဝေးသနည်း။
Tour de France မြင်းစီးသူရဲကဘယ်သူလဲ။
တစ် ဦး တစ်ဖွတ်ကြွပ်အဆင့်2အနိုင်ရရှိပြင်သစ်နိုင်ငံMathieu van der Poel ၏ကမ္ဘာ့အဆင့်အတန်းကိုအတည်ပြုအကြီးမြတ်ဆုံးစက်ဘီးစီးSir Bradley Wiggins ရဲ့အဆိုအရကမ္ဘာမှာဇွန် ၂၈ 2021
ဤဆောင်းပါး၌ကျွန်ုပ်တို့သည်အချိန်ကုန်ဆုံးအကောင်းဆုံးတောင်တက်သမားအချို့ကိုကျော်သွားမည်။ တောင်များကိုရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ကောင်းလောက်အောင်မြန်ဆန်စွာတက်ခြင်းကိုအထူးပြုသည့်အင်အားကြီးမားမှုနှင့်အလေးချိန်အချိုးအစားရှိသောမြင်းစီးသူရဲများ။ (ကြီးထွားလာခြင်း) ကျွန်ုပ်တို့သည်အချိန်ကာလ၏အကြီးမြတ်ဆုံးတောင်တက်သမား (၇) ဦး စာရင်းကိုပြုစုရန်ကျွန်ုပ်တို့၏လမ်းမှထွက်သွားခဲ့သော်လည်းသင်မြင်နိုင်သည်အတိုင်း၊ ၎င်းအရေအတွက်ကိုလျှော့ချရန်မှာအလွန်ခက်ခဲသည်၊ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့မစတင်မီကျွန်ုပ်၌ကျွန်ုပ်ငြင်းဆိုချက်ရှိသည် ခဏအသံကျယ်ဖတ်ပါ။
ပထမ ဦး စွာနှစ်ပေါင်း ၁၀၀ ကျော်စိတ်ကူးယဉ်ပြိုင်ကားများ၊ အထူးကြံ့ခိုင်မှုနှင့်အားကစားစွမ်းအားများရှိသည်။ ကျွန်တော်တို့ဟာယာဉ်မောင်းခုနစ်ယောက်ကိုကပ်ထားမယ်ဆိုရင်ကြီးမားတဲ့ယာဉ်မောင်းတွေအားလုံးကိုရှောင်လွှဲနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ ထို့အပြင်မျိုးဆက်ဆိုင်ရာနှိုင်းယှဉ်မှုများသည်မိုင်းကွင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။
Pantani Coppi ကျောင်းမှထွက်ခွာသွားလျှင်ဂီယာပြောင်းသွားပြီ၊ ပြိုင်ပွဲများပြောင်းလဲသွားပြီ၊ လမ်းများပြောင်းလဲသွားပြီးမျက်နှာပြင်များသည်မကြာခဏကျောက်စရစ်ခဲလမ်းများထက်ယနေ့တွင်ပိုမိုကောင်းမွန်သည် Chris Froome သည် Eddy Merckxor အားမည်သို့မည်ပုံရင်ဆိုင်မည်ကိုမသိနိုင်ပါ။ ထို့အပြင်အားကစားသမိုင်း၏ကြီးမားသောအတုံးအဘို့အဘယ်သူမျှမမူးယစ်ဆေးဝါးကိုက်ရှိခဲ့သည်။ မသက်ဆိုင်ကြောင်းရှင်းလင်းချက်ပြီးတာနဲ့စတင်ကြကုန်အံ့။ (အကောင်းမြင်ဂီတ) ကျွန်ုပ်တို့၏စာရင်းတွင်နံပါတ်တစ်သည်မာကို Pantani ဖြစ်သည်။
သူ့မျိုးဆက်၏ထူးခြားသောတောင်တက်သမားတစ် ဦး ။ အခုတော့အီတလီလူမျိုးတွေဟာတောင်တက်သမားအတွက်စကားလုံးတစ်လုံးရှိပြီး Scallatore ဆိုတာက Pantani လိုတောင်တက်သမားတွေအတွက်နောက်နာမည်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ Scatista ပါ။ အမြင့်ဆုံးတောင်စောင်းများ၌ပင်ထပ်ခါထပ်ခါအရှိန်မြှင့ ်၍ အခြေခံအားဖြင့်သူတို့၏ပြိုင်ဘက်များကိုအရှိန်မြှင့်နိုင်သည့်တောင်တက်သမားများအတွက်ဤဝေါဟာရကိုဆိုလိုသည်။
ယခု Pantani သည်ပြောင်သောခေါင်းသို့မဟုတ်ခေါင်းစည်းဖြင့်ချက်ချင်းမှတ်မိသွားနိုင်ပြီး၊ နားတွင်ရှိသောနားနှင့်ဤဆိတ်သားနှင့်သူ၏ပုံပန်းသဏ္himာန်သည်သူ့ကိုနာမည်ပြောင်၊ အဲလ်ပီရာတာသို့မဟုတ်ပင်လယ်ဓားပြအဖြစ်သို့ရောက်ရှိစေခဲ့သည်။ သူသည်တောင်တက်စတိုင်နှင့်လူသိများပြီးအမြဲတမ်းကုန်းနှီးနှင့်ပေါက်စများတွင်ဖြစ်သည်။ ဒါပေမယ့်သူကသူ့ရူပ၊
သူ့အားသူအလွန်ကြီးကျယ်ခမ်းနားစေခဲ့ခြင်းကသူကိုယ်တိုင်တောင်များတက်သကဲ့သို့တောင်တက်နိုင်သည်။ ဒီစွမ်းရည်ကြောင့်သူ့ကို de de France အောင်မြင်မှုရစေခဲ့ပြီး ၁၉၉၈ မှာ Giro d'Italia ကိုတစ်ချိန်တည်းမှာအနိုင်ရခဲ့သည်။ နောက်တစ်နှစ်မှာ ၉၉ မှာ Giro d'Italia ကိုထပ်မံအုပ်စိုးခဲ့သည်။ လေးကြိမ်တိုင်အောင်အနိုင်ရရှိပြီးပြိုင်ပွဲကို ဦး ဆောင်ခဲ့သည်။ သို့သော်သွေးပြန်ကြောတစ်ခုအနေဖြင့်ရုံးတင်စစ်ဆေးမှုအပြီးတွင်သူ၏ hematocrit သည်မြင့်မားလွန်းသဖြင့်ပြိုင်ပွဲမှနှင်ထုတ်ခံခဲ့ရသည်။
Pantani သည်လုံးဝမောင်းနှင်သူတစ် ဦး လုံးဝမဟုတ် ခဲ့၍ ၂၀၀၄ ခုနှစ်တွင်ကိုကင်းအဆိပ်ပြင်းထန်စွာဖြင့်သူသေဆုံးခဲ့သည်။ (အကောင်းမြင်ဂီတ) မျက်မှောက်ခေတ်တွင် Chris Froom သည် Grand Tours ကိုလွှမ်းမိုးခဲ့သည်။ ယခုအချိန်အထိသူသည် Tour de France ကိုလေးကြိမ်အနိုင်ရခဲ့ပြီး၊ ၂၀၁၈ ခုနှစ်တွင် Giro d'Italia ကိုအနိုင်ရခဲ့ပြီး VueltaaEspana ကိုယခုနှစ်ကြိမ်ရရှိခဲ့သည်။
အဖြစ်အပျက်တွေမကြာခင်မှာပဲ Chris Froome ဟာအားသာချက်တစ်ခုရှိပုံရပါတယ်။ ကင်ညာနိုင်ငံတွင်ဖရိုအုန်းသည်သူ၏တောင်တက်စွမ်းရည်မှပထမဆုံးသင်ယူခဲ့ပြီးနိုင်ရိုဘီတောင်တန်းတွင်အချိန်များစွာကုန်လွန်ခဲ့သည်ဟုပြောကြားခဲ့သည်။ ရံဖန်ရံခါသူလည်းအဲဒီမှာစခန်းချ။
သို့သော်သူ၏ကတိကဝတ်နှင့်ခေါင်းမာမှုကိုစက်ဘီးပေါ်တွင်သာမကမြင်ကွင်းတွင်ပါတွေ့မြင်နိုင်သည်။ တစ်ကြိမ်မှာသူသည်ကင်ညာစက်ဘီးအသင်း၏ Hotmail အကောင့်ကို သုံး၍ အားကစားအသင်းဖြစ်သော UCI ကိုအီးမေးလ်ပို့ခဲ့သည်။ ကင်ညာသည် U23 အသင်းကိုကမ္ဘာ့ချန်ပီယံရှစ်သို့ပို့လိမ့်မည်ဟုအသိပေးခဲ့သည်။ ယခုတွင် Froome ၏ ဦး ခေါင်းနှင့် ဦး ညွှတ်။ တံတောင်ဆစ်များကိုကျော်တက်ခြင်းသည်အထူးကြိုက်နှစ်သက်ခြင်းမရှိဟုကျွန်ုပ်စိတ်ချစွာပြောနိုင်သည်။ ဤသည်ကို Vuelta တွင်Españaကို ၂၀၁၁ ခုနှစ်တွင်လူသိများလာခဲ့ပြီးသူသည်ဒုတိယနေရာတွင်ရပ်တည်ခဲ့ပြီးမကြာသေးမီကထိုပြိုင်ပွဲတွင်အနိုင်ရခဲ့သည်။
နောက်နှစ်မှာတော့ Bradley Wiggin ကို ၂၀၁၂ Tour de France ဆုကိုအနိုင်ယူနိုင်အောင်ကူညီပေးခဲ့တယ်။ ဒါပေမယ့် ၂၀၁၃ မှာသူကိုယ်တိုင်နာမည်ကောင်းရခဲ့တယ်။ သူသည်ယခုနှစ်အစောပိုင်းကအိုမန်ခရီးစဉ်ကိုအနိုင်ရခဲ့သည်။ သူသည်Critérium International၊ Tour de Rome ရှိCritérium du Dauphinéနှင့် Tour de France တွင်ပြုခဲ့သည်။
အကယ်စင်စစ်သင်သည်လန်းအမ်စထရောင်းကိုညီမျှခြင်းထဲမှထုတ်ယူလျှင်၊ နောက်နှစ်တွင်သူသည် ၁၉၉၅ တွင် Miguel Indurain မှစ၍ သူ၏ခေါင်းစဉ်ကိုအောင်မြင်စွာခုခံကာကွယ်နိုင်သည့်ပထမဆုံးစီးသူဖြစ်လာခဲ့သည်။ သူသည် Frace ခရီးစဉ်နှစ်ခုထပ်မံအနိုင်ရခဲ့ပြီးပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကပထမဆုံးပြိုင်ကားသမားဖြစ်လာခဲ့သည် Grand Tour ခေါင်းစဉ်သုံးခုစလုံးကို Bernardino ၁၉၈၃ မှစ၍ တစ်ချိန်တည်းတွင်ကိုင်ထားသည်။ (သာလွန်ကောင်းမွန်သောဂီတ) ကမ္ဘာပေါ်တွင်အမြင့်ဆုံးတောင်တက်သမားများစာရင်းတွင်ဖြစ်နိုင်ခြေမရှိပေ။ Federico Bahamontes ။ သူသည်အနိုင်ရခဲ့သည့် triplein အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှုအတွက်သမိုင်းတွင်ပထမဆုံးစီးသူဖြစ်သည်။ ဘုရင်များ၏ယှဉ်ပြိုင်မှုနှင့် Grand Tour သုံးခုစလုံးဖြစ်သည်။
သူသည် ၁၉၅၉ ခုနှစ်တွင် Tour de France ကိုအနိုင်ရခဲ့သည်။ သူသည်တောင်တန်းဘုရင်ကိုအနိုင်ရခဲ့သည်။ တကယ်တော့သူသည်တောင်ပေါ်ဘုရင်တစ်ပါးတည်းကို Tour de France တစ်ခုတည်းတွင်ခြောက်ကြိမ်ထက်မနည်းအနိုင်ရရှိခဲ့သည်။ သူ့မှာအမည်ပြောင်ရှိခဲ့ပြီး၎င်းသည် Toledo Eagle ဖြစ်သည်။ တိုလီဒိုသည်စပိန်အလယ်ပိုင်းရှိခရိုင်ငယ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ လင်းယုန်သည်လင်းယုန်ငှက်တစ်ကောင်ကဲ့သို့ပျံသန်းသည်။
Toledo ရှိ Bahamontes အတွက်အထိမ်းအမှတ်အဆောက်အ ဦး တစ်ခုလည်းရှိသည်။ Fundacion Sulest မှသူစက်ဘီးဖြင့်သူရရှိသမျှအားလုံးကိုပုံဖော်။ ဂုဏ်ပြုရန်လှူဒါန်းခဲ့သည်။ ယနေ့ထိတောင်ပေါ်သို့တက်နေဆဲဖြစ်သည်။ အဘယ်အရာကိုပကတိတောင်တက်ဒဏ္legာရီ။ (မမျှော်လင့်ဘဲတေးဂီတ) စက်ဘီးသမိုင်းတွင်မြင်းစီးသူရဲနှစ် ဦး သာ Grand Tours သုံးခုစလုံးတွင် King of the Mountains ကိုအနိုင်ရရှိခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့်၎င်းတို့နှစ်ခုစလုံးကိုဤတွင်ထားရှိခြင်းသည်အဓိပ္ပာယ်များစွာရှိသည်။
Luis Lucho Herrera, ရှေ့ကိုခြေလှမ်း။ သူသည် Sean Kelly, Bernardino နှင့် Laurent Fignon တို့အပါအ ၀ င်အချိန်ကာလ၏ထူးခြားချက်အချို့ကိုကျော်လွန်နိုင်ခဲ့သည်။ ၁၉၈၄ ခုနှစ်တွင်ကိုလံဘီယာစက်ဘီးစီးခြင်းအတွက်အရေးအကြီးဆုံးသောအောင်မြင်မှုကိုသူရရှိခဲ့သည်။ ၎င်းသည်သူ၏ပထမဆုံး Tour de France၊ ၁၇ ကြိမ်မြောက်အဆင့်ဖြစ်ပြီး Alp d'Huez တွင်အဆုံးသတ်ခဲ့သည်။
အဲဒီမှာသူကတိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းနှင့်ထိုကာလ၏ထူးခြားချက်အချို့ကိုချပစ်လိုက်သည်။ Vignon၊ Ena နှင့် Robert Miller တို့လည်းအခြေခံအားဖြင့်သူတို့သည်သူ့ကိုနောက်တဖန်မတွေ့ခဲ့ကြပါ။ သို့သော် ၁၉၈၇ ခုနှစ်တွင်သူသည် Vuelta ဖြစ်သည့် Grand Tour ကိုအနိုင်ရသောတောင်အမေရိကမှဖြစ်လာပြီးဒဏ္endာရီတောင်တက်သမားအဖြစ်ခံယူခဲ့သည်။
သူက Sean ကိုသုံးမိနစ်လောက်နေခဲ့ဖူးတယ်။ ကယ်လီတစ် ဦး ချင်းစီအချိန်ရုံးတင်စစ်ဆေးအတွက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရသည်။ သို့သျောလညျး, လမ်းဖွင့် sloped အဖြစ်သူ Lagos de Covadonga ပြီးဆုံးသော 11 ဇာတ်စင်ပေါ်တွင်ပင်သူသည်နောက်ကျောကိုကြည့်ခြင်းနှင့်အခွင့်အလမ်းတိုင်းနီးပါးသည်သူ၏ပြိုင်ဘက်တိုက်ခိုက်ရန်ဘယ်တော့မှလိမ့်မယ်။
ထိုတွင်သူသည်သူ၏ပြိုင်ဘက်များကိုထပ်မံတိုက်ခိုက်ခဲ့သည်။ စင်မြင့်ကိုအနိုင်ရခဲ့သည်။ ထို့အပြင် Grand Tour တွင် ဦး ဆောင် ဦး ရွက်ပြုသည့်ပထမဆုံးကိုလံဘီယာမြင်းစီးသူရဲဖြစ်လာရန်လည်းအချိန်ယူခဲ့သည်။ ကိုလံဘီယာစက်ဘီးစီးရန်အတွက် Herrera သည်မည်မျှအရေးကြီးကြောင်းအလွန်အမင်းခန့်မှန်းရန်အလွန်ခဲယဉ်းသည်။ အမှန်ကတော့, လက်ရှိကိုလံဘီယာတောင်တက်အခွက်အုပ်စုသည် 1980 ခုနှစ်တွင်သူတို့အဘို့သူတို့အဘို့အလမ်းကိုလိုက်လျှောက်နေသည်။ (ပျော်ရွှင်သောဂီတ) ဤလူသည်အချိန်ကာလ၏အကောင်းဆုံးစပိန်စက်ဘီးစီးသူအဖြစ်အငြင်းပွားဖွယ်ကောင်းသည်။ သို့သော်သူ၏ 1973 Tour de France သို့မဟုတ် 1970 Vuelta အနိုင်ရမှုအတွက်မဟုတ်ပါ။ Ocana စာရင်းကိုပြုလုပ်ခဲ့သည်။
သူသည် Col du du Galibier နှင့် Col du Télégraphမှတစ်ဆင့် Jose Manuel Fuente နှင့်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးသူတို့၏အပြင်းထန်ဆုံးပြိုင်ဘက်များနှင့်ခုနစ်မိနစ်ခန့်အကြာတွင်သူသည်သူ၏အသုံးချမှုကြောင့်ဖြစ်သည်။ သို့သော်ကျွန်ုပ်အတွက်မူ ၁၉၇၁ ခုနှစ်တွင်သူသည်တောင်တက်ဒဏ္asာရီအဖြစ်သူ၏အဆင့်အတန်းကိုခိုင်မာအောင်ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ နောက်ဆုံးတွင်အဝါရောင်ဂျာစီ၌ထွက်ပြေးခဲ့ရသည်။
သို့သော်သူ၏အမြတ်ထုတ်မှုများသည် Puy de Dômeကိုအဆုံးသတ်ခဲ့သောအh္ဌမအဆင့်မတိုင်မီအထိဖြစ်သည်။ အဲဒီမှာသူက Eddy Merckx ဟာအားနည်းချက်ရှိတယ်လို့တခြားယာဉ်မောင်းတွေမမြင်ဖူးတဲ့အရာတစ်ခုတွေ့လိုက်တယ်။ သူသည် Windsor ကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီး Merckx တွင် ၁၅ စက္ကန့်သာကုန်ဆုံးခဲ့သော်လည်း၎င်းသည်အနာဂတ်၏နိမိတ်လက္ခဏာဖြစ်သည်။
သို့သော်စင်မြင့်တွင်သူသည်မိမိအတန်းကိုတကယ်ပြသခဲ့သည်။ ၁၃၄ ကီလိုမီတာရှည်သောတောင်တန်းတစ်ခု။ Joaquim Agostinho ကထိုနေ့၏ပထမဆုံးအကြိမ်။
အံ့သြစရာကောင်းတာကသူတို့ဟာ Eddy Merckx ကိုချက်ချင်းပစ်ချနိုင်ခဲ့တယ်။ သို့သော် Ocana တစ်ခုသည်ထိုအရာနှင့်မကိုက်ညီပါ၊ ထပ်မံ၍ တိုက်ခိုက်ပြီးအဝေးမှကီလိုမီတာ ၆၀ အကွာတွင်တစ်ယောက်တည်းမောင်းနှင်ခဲ့သည်။ တစ်နေ့တာ၏ရူပနိမ့်သောတောင်တက်ထိပ်တွင်သူသည်လမ်းပေါ်ရှိနောက်မြင်းစီးသူရဲကိုလေးမိနစ်ခန့်လမ်းပြခေါ်ယူခဲ့ပြီးခြောက်လသာအဆုံးအထိရောက်ရှိခဲ့သည်။
သုံးကြိမ် Tour de France ဆုရှင် Louison Bobet ကဒီဇာတ်ခုံပေါ်ရှိသူ၏အပြုအမူများသည် Fausto Coppi ၏ဒဏ္legာရီတစ်ကိုယ်တော်စီးနင်းမှုများကဲ့သို့ပင်ကောင်းသည်ဟုပြောဆိုခဲ့သည်။ ဒီဟာကလျောက်ပတ်တဲ့တောင်တက်သမားပဲ။ (အကောင်းမြင်ဂီတ) ကျနော့်အမြင်အရ 'Angel of the Mountains' အမည်ပြောင်ထိုက်သည့်မြင်းစီးသူရဲကောင်းသည်ဤစာရင်းတွင်နေရာတစ်ခုရထိုက်သည်။
Charly သည် Gaul သည်လူဇင်ဘတ်မြို့မှစက်ဘီးစီးသူဖြစ်ပြီး ၁၉၅၀ တွင်သြစတြီးယား၏ Tour တွင်ပထမဆုံးအကြိမ်တောင်ပေါ်သို့စီးခဲ့သည်။ သူဟာ ၁၇ နှစ်ပဲရှိသေးပေမယ့် Grossglockner ရဲ့အစီအစဉ်အရသူဟာအများစုကိုဖြုတ်ချနိုင်ခဲ့တယ်၊ ဒါပေမယ့်သူက ၁၉၅၅ ခုနှစ်မှာပဲခိုထဲမှာကြောင်ကိုထည့်လိုက်တယ်။ သူဟာအားနည်းတဲ့အသင်းတစ်သင်းကြောင့်တိုက်ခန်းမှာသိပ်ပြီးမကောင်းခဲ့ပေမယ့်တောင်တန်းတွေ၊ အဲလ်ပ်တောင်တန်းတွေကိုသွားတဲ့အခါသူဟာသူ့အားသာချက်တွေတကယ်ရခဲ့တယ်။
Galibier နှင့် Col Du Télégrapheကိုကျော်ဖြတ်နိုင်သည့်စင်မြင့်တစ်ခုရှိခဲ့သည်။ ထိုတွင်သူသည်ပြိုင်ဘက်အားလုံးအပေါ် ၁၄ မိနစ်နှင့် ၄၇ စက္ကန့်ခန့်မောင်းနှင်ခဲ့သည်။ ဒါကသူ့ကို ၃၇ ကြိမ်မြောက် GC ကနေတတိယနေရာမှာယူစေခဲ့တယ်။ ပြီးတော့ပြိုင်ပွဲ Pyrenees ကိုရောက်တဲ့အချိန်မှာထပ်မံတိုက်ခိုက်ပြီး ၁၇ ကြိမ်မြောက်အနိုင်ရခဲ့သည်။
အနိုင်ရ Louis Bobet ။ ထိုအောင်မြင်မှုများကြောင့်သူသည်တောင်တန်းဘုရင်၏ယှဉ်ပြိုင်မှုနှင့်စင်မြင့်ပေါ်ရှိတတိယအဆင့်တွင်သူ့ကိုအနိုင်ရခဲ့သည်။ ၎င်းသည် Mont ၏တောင်တက်ခြင်းအတွက်စံချိန်တင်ရန်တောင်တန်းများသို့သွားစဉ် Charly Gaul သည်တစ်ကျော့ပြန်ပြန်လာပုံကိုဥပမာတစ်ခုမျှသာဖြစ်သည်။ နှစ်မိနစ်၊ ကိုးစက္ကန့်တစ်နာရီ၊ Ventoux သည်ထိုအချိန်ကမျက်နှာပြင်သည်အလွန်ကောင်းမွန်ခြင်းမရှိသော်လည်း၎င်းသည်ထိုအချိန်ကိုချိုးဖျက်ရန် Jonathan Vaughters ၃၁ နှစ်အချိန်ယူခဲ့ရသည်။ ကျွန်ုပ်တို့တွင်ယာဉ်မောင်းတစ် ဦး ရှိသည်။ Gira Rosa သည် Grand Booke ကိုအနိုင်ရရှိခဲ့ပြီးအချိန်ကာလ၏အမြန်ဆုံး GCN တင်ဆက်သူဖြစ်သည်။ ဟုတ်ပါတယ်၊ ငါ Emma Pooley အကြောင်းပြောနေတာပါ။
ယခု Giro Rosa 2014 တွင်သူမအထင်ကြီးလောက်သောတောင်တက်ခြင်းအောင်မြင်မှုများအနက်တစ်ခုမှာပြန်လာပြီ ဒီနှစ်တွင်အဆင့်ရှစ်နှင့်ကိုးအထိအဆက်မပြတ်ထိပ်သီးအစည်းအဝေးသို့တက်ရောက်ခြင်းအပါအဝင်တောင်တန်းအဆင့်သုံးဆင့်ရှိခဲ့ပြီးမင်းသမီး Emma အားလုံးအနိုင်ရရှိခဲ့သည်။ သူမသည်ထိုင်ဝမ် KOM Challenge ကိုနှစ်ကြိမ်အနိုင်ရရှိခဲ့သည်။ ၎င်းသည် Wuling Pass ရှိ A level အထက် ၃,၂၇၅ မီတာအကွာတွင်ရှိသည်။
2017 ခုနှစ်တွင်သူမနှင့်အနီးကပ်ဆုံးပြိုင်ဘက် ၁၆ မိနစ်နှင့် Si 'Richardson တွင်မိနစ် ၂၀ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခဲ့သည်။ သို့သော်သူမသည်စိတ်ကူးယဉ်တောင်တက်သမားမဖြစ်နိုင်ပါ။ သူကစက်ဘီးစီးတဲ့တောင်တက်သမားဖြစ်တာနဲ့မရောင့်ရဲပေမယ့်လည်းသူမစက်ဘီးကိုအရမ်းတော်တာပဲ။ သူမသည်တောင်ပေါ်အပြေးပြိုင်ပွဲများတွင်ပုံမှန်ပါ ၀ င်ပြီးအတိတ်ကာလက Alpe d'Huez ခရီးဝေး၌အနိုင်ရခဲ့ပြီးတောင်ပေါ်ပြေးပွဲများတွင်လည်းပါ ၀ င်သည်။
ကောင်းပြီ, ဒီဆောင်းပါးရဲ့အစမှာဖော်ပြထားတဲ့မသက်ဆိုင်ကြောင်းရှင်းလင်းချက်ထဲမှာပြောခဲ့သလိုအချိန်ကာလရဲ့အကောင်းဆုံးတောင်တက်သမား (၇) ဦး စာရင်းကိုအတူတကွစုစည်းဖို့အလွန်ခဲယဉ်းပါတယ်။ သင်အကြိုက်ဆုံးအချို့ကိုချန်လှပ်ထားခဲ့ပြီးကျွန်ုပ်အခွင့်အလမ်းရရှိပါကအောက်ဖော်ပြပါမှတ်ချက်များတွင်ကျွန်ုပ်တို့အားအသိပေးပါ။ သို့သော်ခေတ်ကာလများမှယာဉ်မောင်းများကိုနှိုင်းယှဉ်ရန်အလွန်ခက်ခဲသည်။
သို့သော်၊ ယခုတွင်ကျွန်ုပ်တို့တွင် GPS အချက်အလက်ရှိသည်။ အနှစ် ၅၀ မှာငါတို့ကားမောင်းသူအားလုံးကိုနောက်အနှစ် ၅၀ အတွက်နှိုင်းယှဉ်နိုင်တယ်၊ ဒါကကောင်းလိမ့်မယ်။ အိုကေ။ မင်းအခုငါ ၀ တ်နေတဲ့ဒီစပိန်မှုတ်သွင်းထားတဲ့ချွေးတပ်စတိုင်ကိုကြိုက်တယ်ဆိုရင် atshop.globalcyclingnetwork.com ကနေတစ်ဆင့်ဒါကိုကြိုတင်မှာယူနိုင်ပါတယ်။ ဒီဆောင်းပါးရဲ့အောက်မှာဖော်ပြထားတဲ့ဖော်ပြချက်မှာ၎င်းနဲ့လင့်ခ်တစ်ခုရှိနေတယ်။ ဘယ်လိုလုပ်ရမယ်ဆိုတာလေ့လာပါ။ မင်းကမင်းသမီး Emma Pooley ကနေအများကြီးပိုကောင်းအောင်ဘယ်လိုတက်ရမယ်ဆိုတာသင်ယူနိုင်ပါတယ်။ မင်းရဲ့ဆောင်းပါးကဒီမှာပါ။
2,262 မှာထောင်နှင့်ချီအဲဒါအကြမ်းအားဖြင့်ပါကြာရှည်၀ ါရှင်တန်ဒီစီနှင့် Tucson၊ Ariz အကြားလမ်းကြောင်းအတိုင်းဖြစ်သည်။ ကားမောင်းရန် ၃၉ နာရီကြာသည်မဆိုTour ရဲ့ hairpin အလှည့်သို့မဟုတ်တောင်ကုန်းများကစမတ်ညံနေသောကားကိုဒုတိယဂီယာသို့ပစ်ရန်လိုသည်။ဇူလိုင် ၉ ၂၀၁၀ r ။
ဟုတ်ပါတယ်၊ ကျွန်တော်တို့ဘက်လိုက်မှုရှိပေမယ့်စက်ဘီးစီးခြင်းဟာ Sprint ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်များ၊ တောင်ကြီးတောင်ငယ်များနဲ့အရူးလူမျိုးတွေရဲ့ရည်မှန်းချက်တွေကိုလိုက်ဖို့စိတ်လှုပ်ရှားစရာအကောင်းဆုံးအားကစားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ခါတစ်ရံမှာရိုင်းစိုင်းတဲ့အားကစားနည်းနည်းပါပဲ။ အခြားအရာများကဲ့သို့လိုအရာအနည်းငယ်ရှိသည်။ သို့သော်ပြိုင်ပွဲများကိုသင်အမှန်တကယ်နားလည်လိုပါကယနေ့ကျွန်ုပ်တို့စက်ဘီးစီးခြင်း၏လှပမှုအားလုံးကိုသင်အမှန်တကယ်တန်ဖိုးထားနိုင်အောင်ပြိုင်ပွဲများကိုအရှိန်မြှင့်တင်နိုင်သည့်အတွက်ယနေ့ပြိုင်ပွဲများသည်အဘယ်ကြောင့်ဆင့်ကဲဖြစ်ပေါ်လာသည်ကိုရှင်းပြသည်။ အချို့သောနည်းဖြင့်မူကြမ်းရေးဆွဲခြင်းသည်အခြားစီးနင်းသူနောက်ကွယ်တွင်စီးနင်းစီးနင်းနေသောလေကိုချိုးသောအခါအခြားစီးနင်းသူနောက်ကွယ်တွင်စီးနေသည်ဟုလူသိများသည်၊ သူတို့နောက်ကွယ်မှမြင်းစီးသူရဲ၏ဆွဲအားကို ၂၅ မှ ၅၀ ရာခိုင်နှုန်းအထိလျှော့ချသည်။ ရိုးရိုးလေးပြောရမယ်ဆိုရင်နောက်စက်ဘီးသမားတစ် ဦး ရဲ့နောက်လိုက်ခြင်းကသင့်ကိုစွမ်းအင်တစ်ချောင်းသက်သာစေပါတယ်။ ဒါကြောင့်ပြိုင်ပွဲတစ်ခုမှာရှေ့ဘက်ထောင့်ကိုဝေမျှနေတဲ့ကားမောင်းသူတွေကိုမြင်ရတာကဒါကြောင့်အဖွဲ့တွေဟာလမ်းပေါ်ကဆိုင်ကယ်ပြိုင်ပွဲမှာသူတို့ရဲ့ခေါင်းဆောင်ကိုကာကွယ်ဖို့ ri တွေများနေတယ်။ လေမှပုန်းအောင်း။ သင်၏စွမ်းအင်ကိုသင်၏ပြိုင်ဘက်များထက် ပို၍ စုဆောင်းရန်ကြိုးစားပါ၊ သို့မှသာသင်သူတို့ကိုပန်းတိုင်ရှိသည့်အခါများသောအားဖြင့်သင်အသုံးပြုနိုင်သည်။ အမျိုးမျိုးသောနည်းဗျူဟာများနှင့်နည်းစနစ်များကိုသင်၏အသင်းသည် ဦး ဆောင်နေသည့် peloton နက်နက်ရှိုင်းရှိုင်းဖုံးကွယ်ရန်အသုံးပြုသည်။ သို့မှသာသင်သည်သူတို့၏နောက်ကွယ်တွင်အမြဲတမ်းအရှိန်အဟုန်ဖြင့်ထိုင်။ သို့မဟုတ်ရှေ့သို့ထွက်ရန်နှင့်သင်ပင်ပန်းနွမ်းနယ်နေပြီ၊ သို့မဟုတ်အနည်းငယ်ယူရန်လိုနေသည်ဟုဟန်ဆောင်နိုင်သည်။ အခြားမြင်းစီးသူရဲနောက်ကွယ်တွင်စားရန် (သို့) သောက်ရန်အချိန် ပို၍ နည်းသည်စွမ်းအင်တစ်ချောင်းကိုသက်သာစေသည်။ စက်ဘီးစီးခြင်း၏နူးညံ့သိမ်မွေ့မှုများကိုသင်လျင်မြန်စွာနားလည်သွားလိမ့်မည်၊ Sprinting သည်တီဗွီတွင်ရိုးရိုးရှင်းရှင်းကြည့်နေပြီးအမှန်တကယ်ဘဝတွင်စီးနင်းသူများကိုပင်လျှင် ပို၍ ပင်လျှင်မြန်သည်။ finish ကိုကျော်ကြားမှုကိုဂုဏ်သိက္ခာများစွာပေးပြီးသင်အဲဒီမှာရှိတုန်းက grrr တွေအများကြီးရှိတယ်၊ တစ်ခါတစ်ရံမှာအသင်းကစုစည်းပြီးတက်လာတဲ့အချိန်မှာတော့ finish ကိုမိုင် ၅၀ အကွာအထိ finish finish မတိုင်ခင်ကြာမြင့်စွာကတည်းကစတင်သည်။ နောက်ဆုံးကီလိုမီတာအတွက်ကောင်းမွန်သောရာထူးရယူပါယာဉ်မောင်းသူတိုင်းတွင်သူရှေ့တွင်ရှိရမည့်အလုပ်ရှိသည်။ K သည်အစောပိုင်းကစားလိုသောအသင်းဖြစ်သည်။ အားထုတ်မှုတိုင်းရေတွက်လျှင်လူတိုင်းသည်ပန်းတိုင်သို့မရောက်မီတတ်နိုင်သမျှအမြန်ဆုံးစောင့်ဆိုင်းရန်ကြိုးစားသည်။ t o အပြေးပြိုင်ပွဲမတိုင်မီနောက်ဆုံးကီလိုမီတာအနည်းငယ်အလိုအလျှောက်မြန်ဆန်သောမြင်းစီးသူရဲများအားအနိမ့်ဆုံးလတ်ဆတ်အောင်ထားပါ။ ထုပ်ပိုးခြင်းအဖွဲ့၏ ဦး ခေါင်း၌ဝံပုလွေများကို ၀ င်တိုက်မိသကဲ့သို့၎င်းသည်ယာဉ်မောင်းမှာ ၁၀ ယောက်ရှိသည်။ သူတို့ကအဆုံးသတ်မျဉ်းမှစတင်သည့်အခါ၎င်းတို့၏ Sprinter တစ် ဦး တည်းသာကျန်ကြွင်းသည်အထိသူတို့က drop နှင့်တစ် ဦး ချင်းစီတ ဦး တည်းမီးရှို့အဖြစ်စက္ကန့် 30 ကိုတောင်မှထိပ်ပေါ်မှာနေဖို့ရန်စက္ကန့် 30 ။
အသင်းသည်အချိန်ကိုအတော်အသင့်အချိန်မီပြီးဆုံးခဲ့သည်။ မျှော်လင့်ချက်အနေဖြင့်ဂိုးရရန်မဝေးလွန်းပါ။ ထို့ကြောင့်ဤနေရာတွင်ကျွန်ုပ်တို့နောက်ကျောနောက်ခံမောင်းနှင်သူ၏အကျိုးအတွက်ပိုမိုရှုပ်ထွေးသောပုံဆွဲမှုကိုရရှိခဲ့သည်။ ကားမောင်းသူများအပြောင်းအလဲစတင်နေပြီ၊ ယခုရာသီဟုခေါ်ကြသည်။ အခြေခံအားဖြင့် အကယ်၍ သင်အမိုးအကာရလိုပါကသင်ကားရှေ့မှောက်တွင်ကားမောင်းသူနောက်တွင်ထိုင်နေရမည်ဖြစ်သဖြင့်လမ်းဘေးလေတိုက်ခတ်နေသဖြင့်ဘေးတိုက်ထိုင်ရမည်ဟုဆိုလိုသည်။ လမ်းလုံးဝဖွင့်လိုက်သောအခါယာဉ်မောင်း ၁၅ ဦး ခန့်ခိုလှုံရန်ရှာကြသည်၊ သို့သော်ကျန်အဖွဲ့သားများသည်အင်အားအလွန်အကျွံသွင်းထားရမည်၊ သို့မဟုတ်လျှင်သူတို့ကျလိမ့်မည်သို့မဟုတ်မောင်းနှင်နိုင်သည် ဒီအရှိန်အဟုန်ကိုနောက်ကွယ်ကအရှိန်အဟုန်လိုင်းအသစ်တစ်ခုကိုချွတ်လိုက်ခြင်းဖြင့်သူတို့ဟာပုံမှန်အားဖြင့်အတူတကွအလုပ်လုပ်ကြရမယ်၊ ပြီးတော့သူတို့ကံမကောင်းတော့တဲ့အခါအခြေအနေတွေကအရမ်းကိုမြန်မြန်ဆန်ဆန်ရလာတော့မယ်။ အပိုင်းပိုင်းကိုဖြည့်ရန်ခွဲပါ inish line သည်အနိုင်ရသူများအနိုင်ရသည့်နေရာတွင်ထင်ရှားသည်။ သို့သော်ပြိုင်ပွဲအစတွင်နေရာမရွေးလေးထောင့်လေးထောင့်အမျိုးမျိုးနှင့်လမ်းအပျက်အစီးအမျိုးမျိုးကိုကိုင်တွယ်ရမည့်အဓိကအချက်များရှိသည်။ မတော်တဆဖြစ်မှုကိုရှောင်ရှားရန်နှင့်ထိုသော့ချက်ကျသည့်အချိန်များတွင်နောက်ကွယ်မှပြေးနေသောကြီးမားသောရှည်လျားသောကြိုးကဲ့သို့လူအစုအဝေးမှနေရန်ပြိုင်ကားသမားများသည်ရှေ့တန်းတွင်ရှိနေရန်လိုအပ်သည့်အကြောင်းအရင်းအားလုံးသည်သင်အုပ်စု၏နောက်ကွယ်တွင်ကျသွားလိမ့်မည်သာမကသင်၏စိတ်ဓာတ်ကျမှုကိုဖြစ်စေလိမ့်မည်။ - Peloton တိုးချဲ့ခြင်းနှင့်ဆိုလိုသည်မှာသင်သည်ပြန်လာရန်စွမ်းအင်များစွာဖြုန်းတီးခြင်းနှင့်ရှေ့သို့ပြေးနေခြင်းအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိခြင်းထို့ကြောင့်ပြိုင်ပွဲသည်ပြိုင်ပွဲအလယ်တွင်ရုတ်တရက်စတင်ခြင်းသို့မဟုတ်အသင်းများအချင်းချင်းဆန့်ကျင်သောအဆင့်သို့ရခြင်း အခြားဤပြိုင်ပွဲတွင်အဓိကအချက်များမည်သည့်နေရာ၌ရောက်နိုင်သည်ကိုသိသောမြင်းစီးသူရဲ၏အသင်းမန်နေဂျာများအတွက်ကျွမ်းကျင်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်၊ ပိုအတွေ့အကြုံရှိသည့်မြင်းစီးသူရဲများသည်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်စက်ဘီးစီးခြင်းကိုအလွန်အမင်းတန်ဖိုးထားတတ်သော်လည်း၊ ပြိုင်ပွဲဝင် er သည်သင်တန်းကြီးကိုအိမ်သို့ယူဆောင်သွားသည်၊ သို့သော်စက်ဘီးအ ၀ တ်အထည်များတွင်အခြားဆုများရှိသည်။ ပြိုင်ပွဲအတွင်းကွဲပြားခြားနားသောအမျိုးအစားခွဲခြားမှုမြင်းစီးသူရဲများကိုများစွာသောနေ့ပြိုင်ပွဲတစ်ခုတွင်သင်သတ်မှတ်ထားသည်ဆိုလျှင်သင်ကဂျာစီကိုဝတ်ဆင်လိမ့်မည်။ ဥပမာအားဖြင့်, Tour defrancedas သည်တောင်တန်းခွဲခြားမှုတွင်ထိပ်တန်းမြင်းစီးသူရဲ၏အစက်အပြောက်ဂျာစီဖြစ်သည်၊ သို့သော်အစိမ်းရောင်ဂျာစီ၊ Sprint ခွဲခြားထားသည့်အချက်များရှိသည်၊ ငယ်ရွယ်သောယာဉ်မောင်းအမျိုးအစားအတွက်အဖြူရောင်ဂျာစီရှိပြီးနောက်တွင်အဝါရောင်ဂျာစီရှိသည်။ giro italia ပြိုင်ပွဲ၏ခေါင်းဆောင်ဖြစ်သောအစောပိုင်းကခွဲခြားသတ်မှတ်ထားသောကားမောင်းသမားများအတွက်ဂျာစီတစ်လုံးပင်ရှိခဲ့သည်ကိုခွဲခြားသိမြင်ခဲ့သည်။ အမျိုးသားချန်ပီယံများကိုမမေ့သင့်ပါ။ ၎င်းတို့သည် ၄ ​​င်းတို့၏သက်ဆိုင်ရာအမျိုးသားချန်ပီယံဆုအတွက်ကားမောင်းသူများကိုပေးသောအထူးဂျာစီများဖြစ်သည်။ အမြဲတမ်းတစ်ရက်တာပြိုင်ပွဲဖြစ်ပြီးဒီနိုင်ငံမှယာဉ်မောင်းများသာသူတို့အတူတကွနေထိုင်ရာအတွက်ဂုဏ်ယူကြသည်၊ ထို့ကြောင့်သင်၏တိုင်းပြည်ကိုအမြင့်ဆုံးအဆင့်တွင်ကိုယ်စားပြုရန်၊ ပေါ့ပေါ့တန်တန်ဘယ်တော့မှကြောင်း vilege ။ Peloton တစ်ခုလုံးတွင်နာမည်အကြီးဆုံးဂျာစီဖြစ်သည့်ကမ္ဘာ့ဖလားဂျာစီကိုမမေ့နိုင်ပါ။ ဂျာစီသည်ရင်ဘတ်တွင်သက်တံ့ရောင်များဖြင့်အမြဲအဖြူရောင်ဖြစ်နေသည်။ ကမ္ဘာ့ချန်ပီယံကိုအလွယ်တကူရရှိနိုင်ပြီးခရီးသွားလုပ်ငန်းကြီး၏အပြင်ဘက်စက်ဘီးစီးခြင်းတွင်အမြင့်ဆုံးသောဆုလည်းဖြစ်သည်။ ဤဂျာစီများသည်စပီကာများနှင့်ပရိသတ်များအားကြည့်ရှုရန်အတွက်ရောင်စုံ pelotongiving ပြိုင်ပွဲအတွက်ပြုလုပ်ပေးသည်။ လာမယ့်နှစ်တွေအတွက်စကားပြောပါ။ domestique ဆိုတဲ့အသုံးအနှုန်းကိုသင်ကြားဖူးပါလိမ့်မယ်။ ဥပမာအားဖြင့်ကနေဒါနိုင်ငံသားမက္ကဒွိုက်ဟာမကြာသေးမီကပဲ Chris Froommultiple tour de france ဆုရှင်နဲ့လာမယ့်ရာသီမှာသူရဲ့ super domestique အဖြစ်ကနေဒါမြင်းစီးသူရဲသား Michael Woods ကိုလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့တာပါ။ Woodsy နှင့် Chris တို့သည်အဝတ်လျှော်အဝတ်လျှော်သူများ၏အိမ်အတွင်းရှိခေါင်းဆောင်များသည်လူမျိုးများနှင့်တောင်တန်းများပေါ်တွင်မှီခိုအားထားနိုင်သည့်ယုံကြည်စိတ်ချရသောအကူအညီလိုအပ်လိမ့်မည်ဖြစ်ပြီးအိမ်တွင်သူတို့ကိုလေထဲမှထုတ်။ သူတို့ကိုကူညီနိုင်လိမ့်မည်ဟုဆိုလိုခြင်းမဟုတ်ပါ။ ပြိုင်ပွဲကာလအတွင်းနည်းဗျူဟာအရ၊ လှုပ်ရှားမှုများနှင့်တန်ပြန်လှုပ်ရှားမှုများကိုဖုံးအုပ်ခြင်း၊ ဥပမာအားဖြင့်စူပါအိမ်သုံးပစ္စည်းများသည်သူတို့အသင်းခေါင်းဆောင်ကဲ့သို့မောင်းနှင်သူဖြစ်ရန်လိုသည် စင်မြင့်ရဲ့အဆုံးမှာအောင်ပွဲရဖို့ကြိုးစားအားထုတ်ရမယ်၊ ယေဘူယျဖြစ်ခြင်းရဲ့ဖိအားကိုကိုင်တွယ်ရမယ်။ တစ်ခါတစ်ရံအလွန်များများစားစားခွဲခြားနိုင်တဲ့မောင်းနှင်အားပြိုင်ပွဲဒါရိုက်တာများကကယ်တင်ခြင်း၊ သူတို့ဒါရိုက်တာများကိုကယ်တင်ခြင်း၊ သူတို့နှင့်အတူပုလင်းများကို ၀ တ်ဆင်ခြင်း၊ တစ်ချိန်တည်းမှာသူတို့ရဲ့ထိပ်တန်း gcm မော်ဒရင်များဟာအိမ်တွင်းကောင်းတွေဖြစ်ခဲ့ကြတာကြောင့်ဒီပုလင်းနဲ့အလုပ်ကြိုးစားရခြင်းအကြောင်းသိကောင်းစရာတစ်ခု (သို့) နှစ်ခုကိုသင်သိပါတယ်။ ဒါပေမယ့်သင်ကောင်းကောင်းရတဲ့အခါ၊ peloton နှင့်အားကစားဘောင်းဘီများသည်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာစက်ဘီးစီးခြင်းနှင့်ဤပြိုင်ပွဲ၏အခြေခံစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများကိုရေးဆွဲပြီးကြီးကြပ်ကွပ်ကဲသည့်အားကစားအသင်းဖြစ်သည်။
သူတို့ရဲ့စည်းမျဉ်းတွေထဲကတစ်ခုကမင်းဟာမင်းရဲ့နွားကလေးအလယ်ထက်ပိုတက်လာတဲ့ခြေအိတ်တွေကိုဝတ်လို့မရဘူး။ သင်ပြိုင်ဆိုင်သည့်အခါစည်းမျဉ်းအချို့အတွက်အကြောင်းပြချက်ရှိသည်၊ သို့သော်စိတ်ကူးစိတ်သန်းအတွက်အကောင်းဆုံးကျန်သည့်အကြောင်းပြချက်များလည်းရှိသည်။ စက်ဘီးစီးခြင်းကိုနှစ်သက်ရန်အတွက်စက်ဘီးစီးခြင်း၏ရှုပ်ထွေးမှုအချို့ကိုနားလည်ရန်မလိုအပ်ကြောင်း၊ ပြိုင်ပွဲများပြိုင်ဆိုင်မှုသည်အနိုင်ရသူများ၏အချိန် ၁၀ မှ ၂၅ အကြားမကြာခဏဖြစ်ကြောင်းနားလည်ရန်အလွန်အရေးကြီးသည်၊ ထို့ကြောင့်သင်နိုင်ခဲ့သည့်ကြားခံ၏ပြိုင်ပွဲအနိုင်ရသူအားပြိုင်ပွဲဆုရှင်ပြီးသွားသည့်နောက်အပိုဆောင်းအချိန် ၂၅ မိနစ်မှမိနစ် ၅၀ ခန့်ကြာမြင့်သောကြားခံအရံတစ်ခုရှိသည်။ အချိန်ကာလ၏ ကျော်လွန်၍ ကြီးမားသောခရီးစဉ်များနှင့်ပြိုင်ဆိုင်မှုများသောကြောင့်နောက်ဆုံးအုပ်စုသည်တောင်တန်းကြီးများကိုအာရုံစိုက်လာခြင်းကြောင့်တစ်ခါတစ်ရံတွင်ပိုမိုလေးသောယာဉ်မောင်းများနှင့် Sprinters များသည်ခ
အချိန်တိုအတွင်းမှာခေါင်းဆောင်တွေပန်းဝင်ဖို့ခက်ခဲသလိုမဟုတ်ရင်တော့သူတို့ဟာပြိုင်ပွဲကိုကျော်ပြီးဖြစ်မှာပါ။ နောက်ပြီးစင်မြင့်ပြိုင်ပွဲမှာ Sprint မှာမပါဝင်တော့ဘူး။ ယခုပြေးပွဲအကြောင်းပြောရန်လိုအပ်သည်။ ထွက်ပြေးရန်ပြေးလမ်းများသည်ပြိုင်ပွဲ၏အစတွင်ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်ခြင်းနှင့်တစ်ခါတစ်ရံပန်းတိုင်သို့ ဦး တည်လိုက်ခြင်းကြောင့်လိုက်လံမောင်းနှင်ခြင်းကြောင့်သုတ်သင်ပယ်ရှင်းခြင်းမခံရမီမြင်းစီးသူရဲအုပ်စုငယ်လေးဖြစ်သည်။ အကြောင်းပြချက်များရှိသော်လည်းအများစုမှာ Time trialists နှင့်အဖွဲ့များသည်ရှေ့မှောက်လမ်းလျှောက်ထွက်ကာတီဗွီအချိန်ရရန်ကင်မရာများလှိမ့်ပြီးနောက်ကွယ်မှ peloton ၏ကျန်အစိတ်အပိုင်းများသည်ပြိုင်ပွဲ၏ရှေ့မှောက်၌ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နိုင်ရန်အတွက်လူသိရှင်ကြားရှာဖွေကြသည်။ အသင်းများသည်ပြိုင်ပွဲလုပ်နိုင်သည်။ တိုက်ခိုက်မှုများသည်များသောအားဖြင့်တားဆီးခြင်းခံရပြီး၊ ခွဲထွက်နေသောအဖွဲ့များရှေ့တွင်ရှိနေစဉ်အဖွဲ့များသည်ရှေ့သို့တက်လေ့ရှိသော်လည်းဘရိတ်ကိုစော။ မဆွဲပါ။ မည်သူတစ် ဦး တစ်ယောက်ကတိုက်ခိုက်ရန်ဆန္ဒရှိသည်။ ဒါကတကယ်ကိုစွမ်းအင်ဖြုန်းတီးခြင်းပဲ။ တစ်ခါတစ်လေမှာ breaka နည်းလမ်းတွေဟာတစ်ခါတစ်ရံမှာလိုင်းပေါ်ကိုရောက်မလာတာများတယ်။ ပုံမှန်အားဖြင့်တော့နိုင်လိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်မထားခဲ့ဖူးတဲ့သူတစ် ဦး ဆီကအနိုင်ရဖို့အတွက်ဂိုးကိုယူသွားတာပါ၊ စက်ဘီးစီးနေသော peloton တွင်မပါသောစည်းမျဉ်းများအကြောင်းကိုကောင်းစွာပြောရန်၊ ခြေနင်းခြေအိတ်များနှင့် ပတ်သက်၍ ကျွန်ုပ်တို့ယခင်ကကြားဖူးသည့်စည်းမျဉ်းများနှင့်ဆန့်ကျင်သောအရာများကိုနည်းပညာပိုင်းအရဆိုပါစို့၊ သို့သော်ထူးခြားသောအချက်များဖြစ်သည်၊ သို့သော်ထိုစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများမှာ၊ အခြေအနေများအောက်တွင်ကျွန်ုပ်တို့စောင့်ကြည့်သင့်သည်။ ထိုအရာများသည်အဖွဲ့ကား၏နောက်ကျောမှပုံကြမ်းဖြစ်သည့်အခါညှစ်ပါ၊ နည်းပညာအားဖြင့်၎င်းကိုတားမြစ်ထားသည်။ သို့သော်သင်လဲကျပါကသို့မဟုတ်စက်ယန္တရားတစ်ခုရှိပါကစက်ယန္တရားညံ့ဖျင်းပါက၎င်းသည်မျှတမှုရှိသည်။ အုပ်စုတစ်စုလုံးလျှင်စည်းမျဉ်းများကိုလိုက်နာပါ လိုအပ်ပါကသို့သော် peloton သို့မဟုတ် group ရှိအတွေ့အကြုံအရှိဆုံးမြင်းစီးသူရဲသည်ပြိုကွဲခြင်းပြifနာရှိပါက peloton ၏တရား ၀ င်မဟုတ်သောအသံဖြစ်လာသည်။ ဤမြင်းစီးသူရဲသည်တစ်ခါတစ်ရံလူတိုင်းကိုကုသရန်သေချာစေရန်ပြိုင်ပွဲတစ်ခုကိုရပ်တန့်သွားစေသည်။ သူတို့ကိုပုလင်းအပိုတခုပေးရင်ဒါမှမဟုတ်အုပ်စုထဲကိုပြန်ဆွဲခေါ်လိုက်ရင်မင်းကဘယ်လိုလုပ်လဲ။ မင်းရဲ့သူငယ်ချင်းတွေကိုပရီးမီးယားလိဂ်စက်ဘီးစီးခြင်းမှာခြစ်ခြစ်ခြင်း၊ ငါ့စက်ဘီးစီးခြင်း၏ထူးခြားချက်များနှင့်ထူးခြားချက်အချို့ကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းမျှော်လင့်မိသည်။
BMR slr01 ပြန်လည်သုံးသပ်
ရိုးရိုးသားသားပြောရရင်အရမ်းရှုပ်ထွေးတယ်၊ မျှော်လင့်စရာကဒီအရာတွေကိုရှုပ်ထွေးစေမှာမဟုတ်ဘူး။ စက်ဘီးစီးခြင်းသည်လုံးဝရိုင်းရိုင်းသောအားကစားတစ်ခုဖြစ်သည်။ သို့သော် အကယ်၍ သင်အမှန်တကယ်ကြည့်လျှင်ကြည့်ရတာအလွန်လှပြီးပျော်စရာကောင်းသည်။ သို့သော်သင့်ထံမှကြားလိုသည်ကိုသင်ဤဆောင်းပါးမှသင်လေ့လာသိရှိခဲ့ရာများကိုသင်တစ်ခုခုမသိခဲ့ဘူးဟုမှတ်ချက်ပေးပါ။ နောက်ဆောင်းပါးကိုနောက်တစ်ကြိမ်တွင်တွေ့မည်
peloton ပေါ်မှာ Netflix ကြည့်လို့ရလား
မိနစ် ၃၀ peloton စီးသည်မိုင်မည်မျှရှိသနည်း။
မင်းရဲ့မိုင်မိုးလုံလေလုံစက်ဘီးစီးခြင်းသည်သင်ကိုယ်တိုင်ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုနှင့်သင့်တောင်ကုန်းအရေအတွက်ပေါ်မူတည်သည်စီးနင်းလိုက်ပါ။ လူအများစုက ၁၀ ဝန်းကျင်လောက်ကိုဖုံးလွှမ်းနိုင်မယ်ထောင်နှင့်ချီတစ် ဦး အတွက်၃၀-မိနစ်အတန်းအစား။၃ ဇူလိုင် ဒီဇင်ဘာ 2019
Echelon သည် peloton ကဲ့သို့ကောင်းပါသလား။
အကယ်၍ သင်သည်သင်၏တင်းပါးကိုစတူဒီယိုနှင့်ဆင်တူသည့်အတန်းများနှင့်ပြင်းထန်သောစီးနင်းခြင်းများကိုကန်ရန်စိတ်ဝင်စားပါက၊တပ်စုတစ်စုကောင်းတယ် အကယ်၍ သင်သည်အစပြုသူတစ် ဦး ဖြစ်လျှင်သို့မဟုတ်အသစ်ဖွင့်လှစ်သင်ကြားခြင်းများဖြစ်လျှင်၊ သို့မဟုတ်သင်၏ကိုယ်ပိုင်လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်နှင့်ဂီတကိုရံဖန်ရံခါပြုလုပ်ရန်စီစဉ်ထားလျှင်၊Echelonဖွယ်ရှိပိုကောင်းတဲ့ပွဲစဉ်ဖြစ်ပါတယ်။
peloton vs echelon ကဘာလဲ။
ဤစက်ဘီး၏ခုခံမှုအကြားခြားနားချက်တစ်ခုစီသည်ထိုအရာဖြစ်သည်Echelonဆိုင်ကယ်ခုခံ၏ 32 အဆင့်ဆင့်, ပေးထားပါတယ်တပ်စုတစ်စု0-100 အဆင့်ဆင့်ပေးထားပါတယ်။ ၏ခုခံEchelonစက်ဘီးစီးသည်များသောအားဖြင့်လူအများစုအတွက်လုံလောက်သည်ထက်များလိမ့်မည်တပ်စုတစ်စုအနည်းငယ်ချောမွေ့စီးနင်းကယ်နှုတ်တော်မူ၏။စက်တင်ဘာ ၂၁ 2020
၂၀ မိနစ် peloton လုံလောက်ပါသလား။
အကယ်၍ သင်သည်စာရေးကိရိယာစက်ဘီးပေါ်တွင်ပိုမိုမြင့်မားသောခြေလှမ်းများဖြင့်ခြေနင်းနေလျှင်၊မိနစ် 20တစ်ရက်လေးရက်အတွက်တစ်ရက်ဖြစ်နိုင်သည်လုံလောက်သောရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုအတွက်နှလုံးသွေးကြောဆိုင်ရာထောက်ခံချက်နှင့်တွေ့ဆုံရန်လေ့ကျင့်ခန်း။
ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပျမ်းမျှမြင်းစီးသူရဲအဖြစ်သတ်မှတ်သည်၄၅ မိနစ်သင်တန်းသင် 10-15 စီးထောင်နှင့်ချီအမျိုးအစားပေါ်မူတည်အတန်းအစားနှင့်သင်နည်းပြဆရာရဲ့တွေကိုလိုက်နာပါ။ ဥပမာအားဖြင့်, လူအချို့အတွက်အတန်းအစားအလေးချိန်ရှိသောလက်မောင်းလေ့ကျင့်ခန်းတွင်မပါ ၀ င်ပါကအရှိန်အဟုန်ဖြင့်ခြေနင်းနေသောကြောင့်သူတို့ဝေးလံသောအကွာအဝေးသို့သွားနိုင်သည်။
Tour de France တွင်မိုင်မည်မျှရှိသနည်း
ယနေ့ကမ္ဘာအနှံ့မှမြင်းစီးသူရဲများယှဉ်ပြိုင်ကြသည်။ ဒီနေ့ ၂၁ နဲ့ဆန့်ကျင်တဲ့ပထမအဆင့်မှာအဆင့် ၆ ဆင့်ပဲရှိခဲ့တယ်။ တစ်ခုချင်းစီကိုအဆင့် 250 မိုင်ဖုံးလွှမ်း - ဒီနေ့ဗားရှင်းအတွက်အဆင့်အဘယ်သူအားမျှ 150 ထက်ပိုမိုရှည်လျားဖြစ်ကြသည်။ ပထမပြိုင်ပွဲပြန်လည်ထူထောင်ရေးများအတွက်အဆင့်များအကြား၌တည် 1-3 ကြွင်းသောအရာရက်ပေါင်းကိုမြင်တော်မူ၏။
Tour de France ရဲ့အရှည်ဆုံးအဆင့်ကဘယ်မှာလဲ။
အရှည် ၃,၃၈၃ ကီလိုမီတာ (၂,၁၀၂ မိုင်) အရှည်ကိုစီစဉ်ထားပြီး ၂၀၀၀ ပြည့်နှစ်တွင် Tour de France မှ ၂၄၈ ကီလိုမီတာ (၁၅၄ မိုင်) ခရီးစဉ်ဖြင့်အဆင့် ၇ တွင်ပါဝင်မည်ဖြစ်သည်။ အသင်း ၂၃ သင်းသည် ၂၀၂၁ Tour de France တွင်ပါ ၀ င်မည်ဟုမျှော်လင့်ရသည်
၂၀၂၀ ခုနှစ်တွင် Tour de France ၏လမ်းကြောင်းကဘာလဲ။
လမ်းကြောင်း ၂၀၂၁ Tour de France လမ်းကြောင်းကိုပြင်သစ်Télévisions 'Stade2အစီအစဉ်တွင် ၂၀၂၀ နိုဝင်ဘာ ၁ ရက်တွင် Christian Prudhomme ကကြေငြာခဲ့သည်။ အရှည် ၃,၃၈၃ ကီလိုမီတာ (၂,၁၀၂ မိုင်) အရှည်ကိုစီစဉ်ထားပြီး ၂၀၀၀ ပြည့်နှစ်တွင် Tour de France မှ ၂၄၈ ကီလိုမီတာ (၁၅၄ မိုင်) ခရီးစဉ်ဖြင့်အဆင့် ၇ တွင်ပါဝင်မည်ဖြစ်သည်။